Samsung Galaxy S10 5G gbatara na DxOMark | Gam akporosis
Samsung Galaxy S10 5G dị ka ekwentị nwere ngalaba foto kacha mma na DxOMark yana Huawei P30 Pro
El Huawei P30 Pro bụ ugbu a eze DxOMark ogo emere ya na ebe mbu nke Mate 20 Pro. Agbanyeghị, mgbe ịnọ naanị ya n'elu ọkwa maka nwa oge, ugbu a, ọkọlọtọ nke Huawei ga-eso onye isi ya, Samsung, kesaa ya okpueze.
Ọnụ nke na-adịbeghị anya n'elu nke tebụl DxOMark bụ Galaxy S10 5G. N'ihi nke a, ugbu a anyị nwere eze abụọ nke ese foto. Ka anyị lebakwuo anya na akụkọ ahụ ...
DxOMark enyochala Galaxy S10 5G o nyekwala ya otu akara nke Huawei P30 Pro, nke dị afọ 112. O nyekwara ya akara igwefoto dị n'ihu nke 97, nke dị elu karịa nke P30 Pro (89). Nke a bụ ihe kwere nghọta n'ihi na ekwentị mkpanaaka nwere ese foto abụọ n'ihu, ebe naanị Huawei nwere otu.
Samsung Galaxy S10 5G na DxOMark
Ndakpọ nke akara ngụkọta egosi na Flagship Samsung ka mma na ndekọ vidiyo karịa Huawei P30 Pro, ma akara ya dị ala ma a bịa n'ihe oyiyi. DxOMark na-ekwu na mbugharị 5x dị oke mma nke P30 Pro na-enye ya ọnụ na foto.
Galaxy S10 5G na-eji otu kamera ahụ maka ndekọ vidiyo dị ka S10 +, ma o nwere akara vidiyo dị elu. Ihe kpatara ya bụ na ndekọ S10 5G na 4K site na ndabara na-eme ka ederede, ụda na ihe ngosi dị mma. Na mgbakwunye na nke a, ekwuru na igwefoto ToF maka vidiyo bokeh enweghị mmetụta na ọkwa ha, ebe ọ bụ na ọ bụghị oke ha na-anwale. Agbanyeghị, nke a bụ atụmatụ iji tụlee maka onye ọ bụla na-azụta otu n’ime ekwentị abụọ ahụ.
Ngwa ise kachasị elu na ndepụta DxOMark n'oge ahụ bụ Huawei P30 Pro (112), Samsung Galaxy S10 5G (112), ihe Mate 20 Pro (109), ndị P20 Pro (109) na Galaxy S10 Plus (109). Na Xiaomi Mi 9 a kpọgara ya ebe nke isii, yana ihe 107.
Samsung Galaxy S10 5G akara na DxOMark
Ọtụtụ ndị anaghị atụkwasị obi na akara DxOMark Mobile maka igwefoto ekwentị mkpanaaka ka ha na-ekwu na ụfọdụ ndị nrụpụta na-eji ya dị ka ngwa ahịa maka ngwaọrụ ha, na-eme ka ndị a kwenye na nsonaazụ ndị ahụ na-ele mmadụ anya n'ihu. Agbanyeghị, DxOMark kpochapụrụ okwu a afọ gara aga: ọ kwuru na nnwale gị bụ n'efu ma dịkwa mma, ma kwupụtakwa na ndị nrụpụta anaghị emetụta ha.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Samsung Galaxy S10 5G dị ka ekwentị nwere ngalaba foto kacha mma na DxOMark yana Huawei P30 Pro
Okwu ikpeazu: Huawei agaghị enye Apple chipsets 5G ya